Mpisolovava sy Mpisolovava maika | Orinasa Mpampanoa lalàna
Reseo amin'ny mpisolovava marina ny raharahanao
Ny fahombiazana amin'ny raharaham-pitsarana dia manondro valiny mety azo ekena indrindra. Na ho mpampanoa karatra na voampanga ianao dia te hilalao ny tanan'ny karatra efa nokarakarainao ho amin'ny tombotsoany tsara indrindra.
Mitadiava valiny voaporofo ao UAE
Mamolavola vahaolana namboarina izahay ary manome vahaolana ara-dalàna ilaina. Vonona ny hisarika sy hanabeazana ary hitahiry ny mpahay lalàna tsara indrindra izahay.
Arovy ny tenanao, ny fianakavianao, ny namanao ary ny mpiara-miasa aminao
Ny mpanjifanay dia manamarika ny tombontsoa ankafizin'izy ireo miasa amin'ny orinasa law izay be dia be amin'ny fanomezana tolotra ara-dalàna any amin'ny faritra rehetra any UAE, na kely aza izy ireo mba hanomezana azy ireo manokana.
Ny ifantohan'ny faritra ifotony
Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants (Lawyers UAE) dia orinasa mpanao lalàna manampahaizana manokana amin'ny Lalàna Criminal ary manana ny Mpisolovava heloka bevava tsara indrindra any Dubai, Lalàna momba ny fanorenana, lalàna momba ny fandraharahana, lalàna momba ny fananan-tany, lalàna momba ny fianakaviana, lalàna momba ny orinasa & ara-barotra ary koa ny famahana ny fifanolanana amin'ny alàlan'ny arbitration sy ny fitsarana.
Miorina ao Dubai, Abu Dhabi, UAE ary Arabia Saodita ny trano, varotra ary foibe ara-barotra an'ny Moyen Orient, ny toerana misy antsika ary ny fifangaroan'ny fahaiza-manao ara-dalàna no mampitohy ny elanelana misy eo Atsinanana sy Andrefana.
Firenena feno lalàna momba ny lalàna
Ny tetezana mankany amin'ny fahombiazana ara-dalàna
Mpisolovava eo an-toerana sy iraisam-pirenena
Misolo tena ny mpanjifa anatiny
Hakingana amin'ny sehatry ny lalàna isan-karazany
Ny manam-pahaizana any UAE sy ny lalàna Sharia
Fanamarihana ara-dalàna sy fanampiana vonjy maika
Vahaolana vaovao sy famoronana
Hehy amboara lehibe sy be pitsiny
Fanelanelanana tsotra eo amin'ny orinasa
Manome valiny izahay
Mpanolotsaina amin'ny fiteny rehetra misy
Hitanay ho mpiray antoka ny mpanjifanay
Takelaka miorina amin'ny tranokala
Famoahana tranonkala ho an'ny mpanjifa
Fifidianana any UAE Courts
Fikarohana ara-dalàna amin'ny antsipirihany
Mpanolotsaina sy mpiaro ny lalàna
Adihevitra amin'ny raharaham-barotra, Antitrust, Bankruptcy, Formation Company, Fifanarahana, fifanarahana, Litigations.
Heloka amin'ny heloka bevava, heloka bevava, fanolanana, fanararaotana, famelan-keloka, famonoana bibikely, famelezana, fanararaotana, famonoana olona ary herisetra.
Tranga momba ny fananana trano
Fanolanana trano, fivarotana sy fividianana, fifanarahana mifandevitra, fanolanana ary fisalasalana.
Mpahay lalàna momba ny fianakaviana, mpisolovava fisaraham-panambadiana tsara indrindra, mpiaro ny fikolokoloana zaza, mpisolovava fisarahana, fifanarahana fisaraham-panambadiana.
Lalàna momba ny varotra, lalàna Mercantile, lalàna sivily, famoriam-bola, vola vola, fifanakalozana ara-barotra tsy ara-dalàna
Kasety mitaky ratra
Loza ho an'ny lozam-pifamoivoizana, tranga fanararaotana ara-pitsaboana sy tranga tsy firaharahiana, ratra mafy ary fangatahana fiantohana.
Famonoana zava-mahadomelina tsy ara-dalàna any UAE, Miady amin'ny fividianana sy fivarotana zava-mahadomelina, nahazo fanafody narkotika. Famonoan-drongony.
Lalàna maritime, Admiralty, Fandefasana na fandikan-dalàna mitranga amin'ny rano misokatra. Ny fitsipika iraisam-pirenena sy ny Lalàn'ny ranomasina.
Ny famotsiam-bola dia manomboka amin'ny famindrana ny vola azo amin'ny heloka bevava ho loharanom-bola ara-dalàna.
Mpisolovava, mpisolovava ary mpanolo-tsaina momba ny lalàna
Mpisolovava sy Mpanolo-tsaina ara-dalàna manana traikefa
Adv. Ahmad Abdulrahman Abdullah
Mpisolovava & Mpanolo-tsaina ara-dalàna
Dr. Salma Abbas Ahmed
Legal Advisor General Lalàna
Mpanolo-tsaina zokiolona momba ny lalàna
Tsindrio eto raha hijery ireo mpisolovava sy mpisolovava rehetra ao UAE
Ny serivisy ara-dalàna matihanina anay dia nomem-boninahitra sy nekena miaraka amin'ny mari-pankasitrahana navoakan'ny andrim-panjakana isan-karazany. Ireto manaraka ireto dia omena ny biraontsika sy ny mpiara-miombon'antoka aminy noho ny fahaizany eo amin'ny sehatry ny lalàna.
3 Dingana mora azo hahazoana fandresenao
Manampy anao amin'ny dingana rehetra amin'ny làlana izahay
Aza mitady mpisolovava fotsiny - Mitadiava mpisolovava mety. Torohevitra tsara dia tsara avy amin'ny mpisolovava za-draharaha sy manam-pahaizana manokana.
mianatra momba ireo olanao ara-dalàna rehetra
Lazalazao ny raharaha na ny zava-misyo, hazavainao vetivety ny alainao. Misy sary, mailaka na antontan-taratasy azo omena ihany koa.
Famakafakana tranga, Soso-kevitra ara-dalàna & atolotra
Ny mpisolovava manampahaizana manokana antsika dia hanazava ny toe-javatra ara-dalàna, ny zonao, ary ny adidinao ary koa ny fotoana sy mety hampidi-doza anao.
Miady ho anao ao amin'ny Fitsarana izahay
Mandresy amin'ny raharaham-pitsarana misy anao, mpisolovava matihanina, Fahamarinana ary fahatsorana tanteraka. Mahazoa fahafaham-po ary omeo alàlana ny hafa any amin'ny mpisolovava anay.
izahay hanampy anao amin'ny olana sy ny fifandirana
Tonga lafatra ho an'ny raharaha sarotra, mora ho an'ny mpanjifa iraisam-pirenena, miaraka amin'ny traikefa an-taonany 35 taona
Lahatsoratra momba ny UAE ara-dalàna
Ahoana ny fampitomboana ireo fangatahana lozam-pifamoivoizana manokana any Dubai na United Arab Emirates?
Ny isan'ny maty tamin'ny lozam-piarakodia tao Emirà Arabo Mitambatra nandritra ny valo volana voalohany tamin'ny 2014 dia 463, hoy ny tatitry ny Minisiteran'ny Atitany. Ny fiviliana tampoka, ny hafainganam-pandeha, ny tsy fanarahana ny halaviran-dalana azo antoka ary ny fanitsakitsahana ny lalànan'ny fifamoivoizana hafa no antony mahazatra indrindra amin'izany. Na dia hita aza ny fihenan'ny ratra vokatry ny fifamoivoizana,
Ny fizotry ny mpisolovava UAE amin'ny fanangonana trosa
Solika sy lasantsy, serivisy na tranobe lehibe, mazàna, dia mety hanitatra ny saram-pandoavany fa matetika dia handoa ny trosany amin'ny alàlan'ny mpisolovavan'ny UAE. Ny fitondran-tenan'ny orinasa nasionaly dia mety nefa tsy mitovy amin'ny sehatra iray. Ny fepetra fandoavam-bola any UAE dia 30 andro. Na izany aza, mihamitombo matetika izy ireo
Moa ve ianao niharan-doza amin'ny fisotroana sy lozam-pifamoivoizana any UAE
Voarara ny fisotroana sy ny lozam-pifamoivoizana any Emirà Arabo Mitambatra ary iray amin'ireo tranga be mpijery indrindra ao amin'ny fanjakana. Mifanohitra amin'ny toerana hafa, ny UAE dia tsy manana fetra ara-dalàna amin'ny alikaola. Ireo mpanao ratsy dia mety ho voatazona am-ponja hatramin'ny 48 ora ary ny mpitondra fiara dia mety tsy maintsy manome urine sy
Mifidy ny mpisolovava tsara indrindra amin'ny fisaraham-panambadiana any Dubai
Rehefa tonga amin'ny loha ny olana ara-panambadiana ka manapa-kevitra ny hisaraka ianao, ny fitadiavana mpisolovava dia dingana voalohany lehibe. Alohan'ny hisafidiananao ny mpisolovava tsara indrindra amin'ny toe-javatra misy anao dia tokony hotadidinao fa tsy ny mpisolovava rehetra no noforonina mitovy. Mila olona mahay mitety ny dingan'ny fisaraham-panambadiana koa ianao
Torohevitra mahasoa 5 amin'ny fomba hisorohana ireo endrika mahazatra indrindra amin'ny heloka an-tserasera
Ny heloka an-tserasera dia manondro ny fanaovana heloka bevava izay ny Internet dia ampahany manan-danja na ampiasaina hanamora ny famonoana azy. Niely patrana io fironana io tao anatin’ny 20 taona farany. Ny fiantraikan'ny cybercriminalité dia matetika hita fa tsy azo ivalozana ary ireo izay iharan'izany. Misy fepetra azonao raisina anefa
Vahaolana momba ny fanarenana trosa any UAE
Ny vahaolana fanarenana trosa any UAE dia tena sarotra ho an'ny olona izay nampindrana vola avy amin'ny olon-kafa, raha toa ka mitaky fanampiana avy amin'ireo matihanina amin'ny trosa. Rehefa tsy noraharahian'ny mpitrosa anao ny taratasy, izay manome toky diso ary manolotra antony maro na fisavana olana, dia izao no fotoana mety hitadiavana fanampiana. Matihanina amin'ny famerenana trosa
«Previous manaraka »